Ilhaan Cumar oo Trump kusoo rogaal celisay
February 14th, 2019 Ruugcadaa
Waxaa wali taagan is-qabqabsiga u dhaxeeya madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump iyo Ilhaan Cumar oo Minesota ku matasha aqalka Kongreska ee dalka Mareykanka.
Sir Fakatay Kooxo Duullaan Ku Ah Saldanada Garaad Cabdirisaaq
February 13th, 2019 Ruugcadaa
Sida aynu ka warqabno beelweynta Dhulbahante tiirka ugu weyn ee ay ku taagan tahay wuxuu yahay madax dhaqameedyada, waana meesha laga yidhaahdo Madax meel ka saraysa oo la salaaxa ma jirto, balse waayadan dambe maxaa soo baxay?!!!.
Sheeko cusub oo aad u qosol badan igarre iyo c/shugri Muuqaal Daawo
Waa muuqaal kooban oo dhex maraya jilayaasha kala ah igarre yaasiin iyo c/shugri maxamed wuxuuna ku saabsan yahay waxyaabihii ugu yaabka badana ee ay la kulmeen intay noolaayeen , koonkan guudkiisana ay waalnaayeen.
Xisbiyada mucaaradka ah, hay’adaha xuquuqda aadanaha u dooda iyo ururrada ay ku midaysan yihiin saxafiyiintu ayaa ku eedaynaya Somaliland in ay la dirirsan tahay xorriyaddii hadalka.
AKHRISO XIDIDKA IYO XIGALADA DENI EE KU JIRA XUKUMADISA
Xukumadii uu soo dhistay madaxweyne Deni markii dib baadhitaan loogu sameeyey waxaa la soo xaqiijiyey inay tahay dawlad lagu biineeyey xigto iyo xidid, hadii loo baahdana waxaan odhan karnaa Candho wadaag… Bal hoos ka akhriso wixii ka soo baxay baadhitaankii la soo dhameeyey.
Muuqaal cusub jilayaasha igarre iyo C/shugro oo Fariin u diray Soomaalida (Daawo Video)
February 11th, 2019 Ruugcadaa
Halkan waxan ku soo bandhigaynaa muuqaal kooban oo ay soo duubeen jilayaasha igarre yaasiin xaaji iyo saxiibkiis c/shugri maxamed jaamac, Muuqaalkan fariinta oo ahi wuxuu si toos ah ugu socdaa soomaalida, gaar ahaan taageerayaashooda, ee iyagu sida joogtada ah ugu xidhnaan jirey.
Aqoonyahan sare Siciid Uurcad Oo ka Biya diiday wasiirada uu soo magaacabay madaxweynaha Puntland
February 11th, 2019 Iftiinshe
Aqoonyahan Siciid Uurcade oo ka mid ah shakhsiyaad firfircoon ee sida dhow ula socda xaaladaha ka aloosan deegaanada maamul goboleedka Puntland, shir jaraa’id oo uu qabtay waxaa uu si cad uga biya diiday mid ka mid ah wasiiradaasi, oo isagu fal dambiyeedyo dhowr ah ka geystey deegaano ka mid ah gobolka Sanaag.
Turkga : Shiinahu waa in uu wax ka baddelaa qaabka uu ula dhaqmo Muslimiinta dalkiisa
Wasaaradda arimaha dibedda ee Turkiga ayaa dhaliishay qaabka uu Shiinaha ula dhaqmo qowmiyadda dalkaasi looga tirada badan yahay ee Wiiga, waxaana xukuumadda Ankara ay ku tilmaantay xariga baahsan ee dadkaasi lagula kaco mid ceeb ku ah aadanaha.
Digniin Ku Wajahan shacabka xalaasha ah ee reer Buuhoodle
February 10th, 2019 Ruugcadaa
Cabdimaalik Bashiir Baydan oo maamulka Somaliland ka soo qaatay lacag fara badan ayaa magaalada Buuhoodle ku soo galay dhuumasho, wuxuuna magaalada la yimi 4 gaadhi oo ay 2 yihiin gawaadhi uu isagu gaar u wadan doono, iyo 2 ka mid ah 11-ka gaadhi ee loo soo siiyey inuu qoryo saaro, 9-ka kelana waxaa loo soo siiyey lacag ahaan.
Baarlamaanka Puntland Oo U Codeeyay In Si Wadar Ah Loo Ansixiyo Golaha Wasiirada Maamulkaasi
Golaha wakiilada Puntland oo maanta dood dheer ka yeeshay hanaanka loo ansixin doono xukuumadda cusub ee uu soo magacaabayo madaxweyne Siciid Cabdulaahi Deni ayaa cod gacan-taag ah ku meel mariyay in golaha wasiirada si wadar ah loo ansixiyo.
Finland: Lacago bilaash ah oo sababay shaqo la’aan
February 9th, 2019 Iftiinshe
Waa fekir rajo badan laga qabay oo la aaminsanaa in uu yahay mid leh mustaqbal wanaagsan, balse markii dambe sababay in dadkii ay shaqeysan wayaan. Lacago bilaasha ah oo qof walb ay dowladu siiso qaar kamid ah dadka aan shaqeysan ayaa loogu yeeray dakhliga aas aasiga ah, hasayeeshee tijaabadii ugu horeysay ee Yurub laga sameeyay ayaa la soo afjaray labo sano kadib, sababtoo ah lacagihii bilaashaka ah ayaa la oggaaday in aysan noqon kuwa wax soo kordhiyay.
Khabiir Qaramada Midoobay ka tirsan oo sheegtay in Sacuudi Carabiya ‘ay xannibtay’ baaritaanka dilkii Khaashuqji
February 8th, 2019 Ruugcadaa
Sacuudi Carabiya ayaa “si xad dhaaf ah waxa ay u xannibtay una wiiqday” awooddii Turkiga uu ku baari lahaa dilka Jamaal Khaashuqji, khabiir Qaramada Midoobay ka tirsan ayaa sidaasi sheegtay.
LONDON OO LAGU SOO BANDHIGEY SHIDAALKA IYO GAASKA KU JIRA XEEBAHA DALKA SOOMAALIYA
February 7th, 2019 Ruugcadaa
Bandhiga sahmin lagu sameeyay xeebaha dalka Soomaaliya ee ku jira kheyraadka shidaalka iyo gaaska ayaa lagu soo bandhigey magaalada London. Waxaana ka soo qeyb galey shirkadaha ugu waaweyn ee soo saara shidaalka iyo kuwa maalgaliya , iyadoo loo tusayay sida ugu casrisan qaab electronic ah iyo buug warbixin dhan ay ku qoran tahey ayay maclumaadkaas ku baxayeen .
Magaalada Tog-Wajaale oo lagu qabtay lacag maalaayiin ah oo loo waday Hargeysa
Magaalada Tog-wajaale ayaa lasheegay in lagu qabtay aduun lacageed oo gaadhaya 60 million oo birr oo isgujira lacagaha 13 wadan iyo 7kg oo dahab qaydhiin ah kaasoo isna lagu qiyaasay inkabadan 10 million.
February 6th, 2019 Ruugcadaa
Waxaa toddobada bishan Febraayo lagu wadaa in magaalada London ee dalka Ingiriiska uu ka dhaco shir lagu soo bandhigi doono maclumaad la xiriira sahmin shidaal oo laga sameeyay Soomaaliya.
Cali Sandulle Oo Xamar Loo Qaaday
February 5th, 2019 Ruugcadaa
Waxaa magaalo madaxda soomaaliya ee muqdisho loo soo qaaday alle ha caafiyee Cali Sandulle Oo aad u xanuusanaya, oo maantana u baahan in si soomaalinimo loogu soo gurmado.
February 4th, 2019 Iftiinshe
Turkiga oo looga digay ganacsiga dahabka Venezuela
Dowladda Turkiga ayaa wajahaysa cadaadis horleh oo ah inay joojiso dahabka ay ka iibsanayso dalka Venezuela, BBC-da ayaa sidaasi ogaatay. Ilo wareed ah diblomaasi sare oo reer Galbeed ah ayaa BBC-da u sheegay in Turkiga uu ka mid yahay dalalka walaaca laga qabo in xiriir ganacsi la sameyaan Venezuela.
Maxaad ka taqaan wiilka Soomaaliga ah ee lafdhabarta u ahaa guulihii Qadar?
February 2nd, 2019 Ruugcadaa
Akram Xasan Cafiif oo 22 sano jir ah waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda xirfadda sare leh ee sida weyn isha loogu hayo. Waxa uu lambarka 10-aad uga ciyaaraa xulka qaranka ee waddanka Qadar, isagoo kaalin mug lehna ka qaatay guulihii at Qadar ka gaartay tartanka koobka Aasiya oo ay ugu dambeyn Jimcadii koobka ku hanteen.
Maah maahyo Saddex ley ah oo Xiisa Badan, waana Igarre iyo Ansal(DAAWO)
Halkan waxaan idinku soo bandhigaynaa murti cajiib ah, maah maahyo Af- soomaali ah oo daran dooriya, waxaana si talantaali ah isu dhaafsanaya igarre yaasiin iyo ansal qoor dheere.
Igarre iyo muuqaal cusub oo qosol badan daawo (VIDEO)
January 31st, 2019 Ruugcadaa
Waxaan halkan ku soo bandhigaynaa muuqaal yar balse xiiso badan oo aan filayo in aad ka heli doontaan, waxyaabaha uu xambaarsan yahay.
WARIYAHA IYO LAALUUSHKA:
January 29th, 2019 Ruugcadaa
Muddo haatan laga joogo 10-sano, ayaan magaalada Nairobi waraysi kula yeeshay Mudane #Cabdiraxmaan_Faroole. Intii aanu waraysigu bilaabmin, waxaa hotelkii Madaxwaynuhu degganaa ugu tagay koox ka tirsan NTV-kenya, waxay ii sheegeen in ay iyaga qudhoodu waraysi la yeelan doonaan Madaxwaynaha.
2 diyaaradood oo isku dhacday, xadka Talyaaniga iyo Faransiiska
January 27th, 2019 Iftiinshe
Khasaarahan ayaa yimid ka dib markii ay isku dhaceen diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah ee loo yaqaanno helicopter-ka iyo mid nooca yar yar ah. Kooxaha gurmadka deg degga ayaa 2 qof oo dhaawac ah ka helay goobta ay diyaaradahan ku burbureen, sida ay bartooda twitterka kusoo qoreen mas’uuliyiinta waaxda bad baadada buuraha ee talyaaniga , oo marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaanno (CNSAS).
WAAR HOY NABAD IYO NOLOL HALA WADA QARAABTO YAAN LA IS QALICIN
January 24th, 2019 Ruugcadaa
QABYO NINKEEDA AYAA DHAMAYSTIRA
Madaxweynihii Hore Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay meel uu ka hadlayay, waxa uu eedeeyn uu u meel dayin dusha ka saaray Dowlada Federaalka Soomaaliya, ka dib eedeeyntaas ayaa waxaa qoraalkan JAWAABTA ah u soo diray. Abdullahi Sheekh Hassan oo ah Wasiirka Dastuurka maamulka Koofur Galbeed. AKHRIS WACAN.
Puntland oo digniin u dirtay ganacsatada
January 24th, 2019 Iftiinshe
Ha’yada faya dhowrka maamulka Puntland ayaa fariin ku aadan badeecooyinka iyo dawooyinka watigoodu dhamaaday u dirtay ganacsatada deegaanada maamulkaasi Puntaland.
Ciyaaryahanka reer Masar ee u safta kooxda Liverpool ayaa ku guulaystay billadda xiddigga sannadka 2018 ee kubadda cagta Afrika ee uu bixiyo Xidhiidhka Kubadda Cagta Afrika, waana markii labaad ee uu ku guulaysto. Salaax waa 26 jir weerar ka ciyaara, waxaanu billadda kaga guulaystay saaxiibkiisa reer Senegal ee ay isku kooxda u saftaan, Sadio Mane iyo weeraryahanka reer Gabon ee Arsenal u safta, Pierre-Emerick Aubameyang.
January 23rd, 2019 Iftiinshe
Maxkamad ku taalla dalka Ruushka ayaa diiday in dammaanad lagu sii daayo nin u dhashay dalkaan Mareykanka oo loo heysto inuu falal basaasnimo ah ka waday Ruushka.
Xiisad siyaasadeed ayaa lagu soo warramaya in maalmahan ba ay ka taagneyd Dowlad Deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya. Madaxweyne Mustafe Muxumad Cumar ayaa maalin ka hor labo jeer looga yeeray magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya, waxaana markii uu dib ugu soo laabtay Jigjiga la sheegay in uu kulamo la qaatay golihiisa wasiirrada oo la aaminsan yahay in uu kala hadlayo xaaladda taagan.
Soomaaliya Oo Loo Ogolaaday Inay Lacag Soo Daabacato
January 22nd, 2019 Ruugcadaa
Hey’adda lacagta adduunka ee (IMF) ayaa Soomaaliya u ogolaatay inay lacag soo daabacan karto, si taasi u dhacdana loo baahan yahay ilaa$41 million oo ah qorshaha wejiga 1aad.
Holhol Oo Lagu Qaatay Lacag Dhowr Malyan Ah
January 20th, 2019 Ruugcadaa
Sida aanu ku helayno xogaha dahsoon ee biya kama dhibcaanka ahi, waxay tibaaxayaan in shirkaddii Kanooko ay ku bixisey qodista ceelasha holhol lacag sadex malyan oo hordhac ah, yaa lacagtaasi gacanta loo geliyey?